Kooxo hubeysan oo saaka weeraray Jaamacadda Gaarisa – Radio Muqdisho
Wararka ka imaanaya magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegaya in hadda ay rasaas oa socoto Jaamacadda magaaladda Gaarisa,wararka ayaa intaa ku daraya in subaxnimadii hore ee saakay ay tacshiirad ka bilaabatay gudaha Jaamacaddaasi.
Waxaana la ogeyn qasaaraha ka dhashay weerarkan saaka lagu qaaday Jaamacadda magaalada Gaarisa.
Dhamaan goobaha ka agdhow goobta Jaamacadda ku taalo ayaa xiran,waxaana ku hareeraysan dhismaha Jaamacadda ciidamo aad u fara badan kuwaas oo isugu jira Boliis iyo Militiri iyadoo shacabka magaalada Gaarisa ay cabsi xoogan soo wajahday.
Ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga cida weererka ku soo qaaday Jaamacadda magaalada Gaarisa, hase yeeshee waxaa falalka noocaan ah ku caan baxay maleeshiyaadka nabad ddiidka ah ee UGUS oo weerero dhiig badan uu ku daatay ka fuliyay gudaha dalka Kenya.
Ardaydii iyo maamulka Jaamacadda uu markii weerarka dhacayay ku sugnaa gudaha Jaamacadda ayaa lagu soo waramayaa in ay ku carareen Masjid ku dhex yaala gudaha Jaacamadda.
Jaamacadda magaalada Gaarisa ayaa waxaa ardayda wax ka barata kamid ah dad ka soo jeeda gobolada kale ee dalka Kenya.
Dhagesyo Warka Subax ee Radio Muqdisho